Calaamadaha Ellicott ee Vietnam oo loogu talagalay Dredgers - Ellicott Dredges
Ellicott® Heshiiska Calaamadaha Caalamiga ah ee Vietnam Loogu talagalay 2 Dredgers. Shirkadaha Mareykanka waxay u dagaallami doonaan heshiisyada Vietnam
Source: ENR waxaa qoray Sherie Winston
In kasta oo laba shirkadood oo dhisme oo Mareykan ah ay saxiixeen qandaraasyo intii lagu jiray safarkii taariikhiga ahaa ee Madaxweyne Clinton ay ku tagtay Vietnam 17kii Nofeembar 20-XNUMX, daadka togaga lama filayo inuu u furmo shirkadaha Mareykanka ee cusub. Shirkadaha horeyba ganacsi u sameystay waxaa jiri kara kuwa lugta ku taagan.
Qulqulka cutterhead waxaa loo adeegsan doonaa si loogu soo celiyo marinnada waraabinta ee la muujiyey ee kor ku xusan waa 1 ee 2 4000HP dredgers oo la gaarsiiyey 4 sano kahor Ellicott® International to Vietnam
“Si aad ugu guuleysato Vietnam waxaad u baahan tahay dulqaad badan, taageero firfircoon oo ka timaad dowladdaada, wakiilka Fiyatnaamiis oo fahmaya hababka ganacsi ee galbeedka iyo kuwa maxalliga ah iyo xoogaa nasiib ah,” ayay tiri Ellicott® Wakiilka Caalamiga ah.
Ellicott® International waxay naqshadeysay oo ay dhistay ceel biyoodyo in kabadan 100 sano waxayna leedahay taariikh dheer oo gaarsiinta qalabka qashin-qubka Vietnam. Intii ay booqashada ku jirtay Clinton, waxay shirkaddu laba heshiis la saxiixatay Wasaaradda Gaadiidka oo loogu talagalay laba jeex jeex jeex jeex ah, qaybo dayactir iyo tababar. Qandaraasyada la isku daray ayaa gaaraya $ 3 milyan. Doomahaas waxaa soo iibsaday laba cutub oo ka hawlgala Vietnam Waterway Construction Co., Vinawaco, oo ah shirkad qodaya dhisme dawladeed oo hoos timaad wasaaradda gaadiidka.
Labada “DRAGON®”Dredges (Series 1170, 14 inch [355 mm]) markii hore waxaa loo isticmaali doonaa dib u dhiska shabakadaha waraabka ee Mekong River Delta oo ay burburiyeen daadadkii ugu dambeeyay. Qandaraasyadu waxay bixiyaan in loo wareejiyo tikniyoolajiyadda Fiyatnaam si wiishka halkaas loogu dhammaystiro iyada oo ay hoos timaad maamulka Wasaaradda Gaadiidka loona geeyo Vinawaco horraantii 2001. Ellicott® International waxay bixisaa dhammaan mashiinnada.
Booqashada Clinton waxay xoojisay suurtagalnimada xiriir dhaqaale oo xoogan oo udhaxeeya labada dal kaas oo ka dhashay heshiiskoodii ganacsi ee laba geesoodka ahaa ee 13-kii July. Laakiin shirkadaha Mareykanku maahan kuwa kaliya ee raadinaya gabal gabal ah. Iyada oo maalgashi badan oo Vietnam ay maalgeliyeen Bangiga Adduunka iyo Bangiga Horumarinta Aasiya, tartanka shaqadu wuxuu leeyahay dhadhan caalami ah.
“Reer Fiitnaam waxay qaddarinayaan taageerada farsamo ee aan siinno,” ayuu yidhi Fred Berger, oo ah madaxweyne-ku-xigeenka shirkadda Louis Berger Group Inc., East Orange, NJ laakiin taasi macnaheedu maahan in qayb libaax ka qaadanayso shaqada Mareykanka Berger ayaa ku doodaya in tartanka ka socda wadamada kale durba waa adag yahay. "Jabaaniyiinta ayaa si aad ah u tartamaya," ayuu yiri.
The Berger Group iyo Stanley Consultants Inc., Muscatine, Iowa, oo ay weheliyaan Vietnam's Transport Engineering Engineering Corp., waxay ku guuleysteen qandaraas bishii la soo dhaafay si ay u bixiyaan naqshad faahfaahsan iyo adeegyo kormeer dhisme oo loogu talagalay Bangiga Horumarinta Aasiya ee Bangiga Horumarinta Aasaasiga ah ee ay maalgeliso Waddada Bariga Bariga ee Vietnam ee gobolka Quang Tri. . Berger wuxuu sidoo kale lashaqeynayaa Maamulka Wadada Federalka Mareykanka ee dadaalka ay maalgalineyso Bangiga Aduunka si loo horumariyo kaabayaasha hareeraha Hanoi. Mashruuca socda, kaas oo lagu bartilmaameedsanayo ilaa 17 goobood oo magaalada ku wareegsan, waxaa ka mid ah casriyeynta is-weydaarsiga waddooyinka waaweyn iyo shaqada waddooyinka. -dhammaan-
Waxaa dib looga daabacay ENR